Vaovao - Inona avy ireo fepetra hampihenana ny fihinanana elektroda
Amin'izao fotoana izao, ny fepetra lehibe hampihenana ny fihinanana elektroda dia:
Manatsara ny masontsivana rafitra famatsiana herinaratra. Ny masontsivana famatsiana herinaratra dia singa lehibe manimba ny fanjifana electrode. Ohatra, ho an'ny lafaoro 60t, raha 410V ny elatra ambaratonga faharoa ary 23kA ny ankehitriny, dia azo ohaina ny fanjifana elektroda any aloha.
Ny electrode composite-cooled dia natsangana. Ny electrode electrode composite-cooled dia karazana electrode vaovao novolavolaina tany ivelany tato anatin'ny taona vitsivitsy. Ny electrode composite-cooled amin'ny rano dia misy ny fizarana fantsom-by vita amin'ny vy ambony rano sy ny faritra miasa amin'ny grafite ambany, ary ny fizarana misy rano-mangatsiaka dia manodidina ny 1/3 amin'ny halavan'ny electrode. Koa satria tsy misy ny fitrandrahana avo lenta (oxidation mari-pana) ao amin'ny faritra fantsom-by vita amin'ny vy, dia mihena ny fitrandrahana elektrôtra ary ny fizarana fantsom-by vita amin'ny vy dia mitazona fifandraisana tsara amin'ny mpikirakira. Koa satria ny kofehin'ny fizarana mangatsiaka rano sy ny sokajy grafita dia manana karazana hatsiaka amin'ny rano, miorim-paka ny endriny, tsy misy fahasimbana, ary mahazaka herinaratra goavambe, izay manatsara ny tanjaky ny fifandraisana elektrôtra, ka mampihena be ny fihinanana elektrôtra.
Miorina manohitra ny fitrandrahana oksidasian'ny elektrônita elektrita. Raha jerena ny fanjifana electrodes amin'ny fizotry ny fandrendrehana, dia raisina ny fepetra teknikan'ny famafazana rano electrode grafita sy fisorohana ny oksiôida, izany hoe, fitaovana famafazana rano peratra no raisina eo ambanin'ny gripa elektrônika hanaparitaka rano amin'ny faritra electrode, ka io rano io dia mikoriana midina amin'ny tampon'ny electrode, ary ny fantsom-by dia ampiasaina hanapoahana rivotra mifatotra amin'ny etona misy ankehitriny ambonin'ny lohan'ny elektrônaly fonon'ny lafaoro, hahafahana manainga ny rano. Amin'ny fampiasana an'io fomba io, nihena miharihary ny fihinanana elektrônaly vy. Ny teknolojia vaovao dia ampiharina amin'ny lafaoro mahery vaika avo indrindra. Ny fomba elektrônika manondraka rano dia tsotra, mora ampiasaina ary azo antoka.
Teknolojia firakotra ambonin'ny elektrôtra. Ny teknolojia famolavolana elektroda dia fomba tsotra sy mahomby hampihenana ny fanjifana elektroda.
Ny akora firakotra elektroda ampiasaina matetika dia ny aliminioma sy akora seramika isan-karazany, izay misy fanoherana mahery vaika amin'ny hafanana avo ary afaka mampihena ny fanjifana oksidana amin'ny lafin'ny electrode.
Dip elektroda no ampiasaina. Ny electrode dip dia ny handentika ny electrode ao amin'ny agents chemicals ary hanao ny elakelan'ny electrode hifaneraserana amin'ny agents mba hanatsarana ny fanoherana ny electrode amin'ny oxidation amin'ny hafanana avo. Ny fanjifana elektrode dia ahena 10% ~ 15% raha ampitahaina amin'ny elektroda mahazatra.
Fotoana fandefasana: Aug-10-2020